Abavelisi beBhokisi yomngundo kunye nomzi mveliso - China abavelisi bebhokisi yomngundo
Umatshini wokuphosa isanti xa usilahla
Iinkcukacha zeMveliso: Ukubumba iiflaski sisixhobo esisetyenziswa kwiziseko. Xa umatshini wokubumba usebenza, iiflegi zokubumba zibamba isanti ukwenza ulwakhiwo oluthile. Emva kokuba impahla efana nentsimbi etyhidiweyo yagalelwa kwisanti ebunjiweyo eyayibanjwe ziiFlasks zokubumba, into etyhidiweyo iya komelela kwaye ifake ekubunjweni okufunekayo. Iiflasking zokubumba ziqhele ukwenziwa kwizinto zentsimbi kwaye zenziwe ngomatshini ukuhlangabezana neenkcukacha. Inkqubo yoTshintshiselwano 1.Isampulu okanye ukuzoba ngumthengi 2.Tool ...
Ukupakisha kunye nokuhanjiswa kweenkcukacha zokuPakisha: Ukupakisha unganxibanga okanye ibhokisi yeenkuni Iinkcukacha zokuHanjiswa: kwiintsuku ezingama-30 emva kokufumana isiQinisekiso seMveliso yokuGcina 1.Gxila kubungakanani obukhulu / obuphakathi, kunye neesayizi ezincinci. 2.I-Gray iron / i-Ductile yokuphosa i-iron ngenkqubo ye-Resin-Bonded sand cast. Inkqubo yeeNkonzo zethu zeNtengiselwano 1.Sampula okanye ukuzoba ngumthengi 2.Ukucoca isindululo kunye nengxoxo 3.3D Uyilo lwezixhobo 4.Umveliso wokucoca ulwelo 5.Umvelisi weenxalenye ezibi 6.CNC Machining 7.Ukulungisa kunye neFini ...
Iselwa sisixhobo sobuchwephesha esibalulekileyo sokwenza umgca wokuzenzekelayo okanye wokuzenzekelayo. Machining ngomatshini CNC phambili ukuqinisekisa ngobuciko eliphezulu kunye interchangeability elungileyo, ntathu kuhlolwa kunye CMM. Izinto zentsimbi ye-ductile, i-grey iron yoluhlu oluphezulu kunye ne-welded-steel ingafumaneka, i-flask ine-rigidity ephezulu kwaye inokuthwala uxinzelelo oluphezulu. Singayila kwaye senze ubungakanani obahlukeneyo beeflaski kwimfuno yakho, sikwenza neebhotile kunye nemoto pallet ngokwemizobo kunye neenkcukacha zobuchwephesha kumthengi.
I-Sandbox kwi-Casting Machine Systerm
1. Yiba ngqongqo oluphezulu.
2.Ukuthwala uxinzelelo oluphezulu.
3. Ngaba ungahamba kakuhle kumgca wokubumba.
4. Uyilo kunye nokwenza ubungakanani beeflaski kwiimfuno zakho.
Umatshini wokuphosa isanti esetyenzisiweyo
Semi-oluzenzekelayo Umatshini Ukubumbela, Flask zomngundo Machine, Esingxobeni Ukubumbela, Ibhokisi yesanti, Umatshini wokukroba ngaphandle, Ukubumba Ivoti Flask,